ရေးသားသူ may16 at Wednesday, December 09, 2009
Welcome December 9, 2009 at 4:23 PM
သူတစ်ပါးရဲ့ ကျေးဇူးကို အထူးသိတတ်သူအတွက် သေဘေးတောင် လွတ်နိုင်တဲ့ သာဓက တွေကြောင့် ကျေးဇူးရှိသူကို ကျေးဇူးတင်ထိုက်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတော့ မစွပ်သင့် ဘူးပေါ့နော်။
ဂျပန်ကောင်လေး December 9, 2009 at 7:44 PM
တလုပ်စားဖူး သူ့ကျေးဇူးတဲ့... အင်း.. ဒီအသက်အရွယ်အထိ ကျေးဇူးတွေ ပြန်ဆပ်မယ်ဆိုရင်တော့ အများကြီးပါပဲဗျာ... ကူညီခဲ့တဲ့သူတွေက အများကြီးကို...... မိဘ ၂ ပါးကတော့ အနှိုင်းမဲ့ပေါ့ဗျာ.....
သူရဲကောင်းကြယ် December 9, 2009 at 11:07 PM
ကျေးဇူးတရားကို ဖော်ကျူးထားတဲ့ ပုံပြင်လေးမို့ ကြိုက်ပါတယ်ဗျာ
ညရဲ့ကောင်းကင် December 10, 2009 at 9:44 AM
Anonymous December 10, 2009 at 11:07 AM
"မင်းကြီး သတ္တ၀ါဆိုတာ ပျက်စီးချိန်တန်လာရင် မိမိရဲ့ဘေးကို မမြင်နိုင်တော့ပါဘူး.. . ."
ကိုယ်ပြုတဲ့ကံ(အလုပ်)က အကျိုးပေးတာကို အချိန်တန်တယ်လို့ ပြောတာနဲ့တူတယ်။
မျှဝေပေးတာ ကျေးဇူးပါ။။ ဒီ
မိုးစက်အိမ် December 11, 2009 at 12:08 AM
ဒါလေးလည်း ငယ်ငယ်ကဖတ်ဘူးတယ် ဒါပေမဲ့ မရိုးဘူး
ဌက်တွေထဲမှာတောင် ရုတ်ညံ့ တဲ့ ဌက်လို့ သတ်မှတ်ထား
တဲ့ လင်းတ ဌက်တွေတောင် ကျေးဇူးသိတတ်ကြရင်
လူတွေဆိုရင် ဒီထက်ပိုသိသင့်တာပေါ့ . . . ကျေးဇူး
မသိရင် နေပါ ကျေးဇူးတော့မကန်းသင့်ဘူးပေါ့နော် . . .
အနမ်း December 11, 2009 at 12:37 AM
တိရစ္ဆာန်တောင် ကျေးဇူးသိတတ်တာ၊ လူတွေကအသိဥာဏ်ပိုရှိတော့ ကျေးဇူးတရားကိုပိုပြီးမမေ့သင့်ဘူးပေါ့ညီမရယ်။ ဗဟုသုတရစေတဲ့ပိုစ့်ကောင်း တစ်ပုဒ်ပါပဲ။ အဆင်ပြေပျော်ရွှင်ပါစေ။
အိမ် December 12, 2009 at 3:51 AM
ကိုလူထွေး December 12, 2009 at 8:20 PM
ကျေးဇူးတင်လို့ လှမ်းထားတဲ့အဝတ်တွေ လိုက်ရှာလိုက်ပါအုံးမယ် သူဌေးသမီး သူဌေးသားတို့ခင်ဗျား ...